Usarega Cigna achienda neMhondi | Martech Zone
Mugovera, December 22, 2007 Mugovera, December 22, 2007 Douglas Karr
Zorora murunyararo, Nataline.
Kana iwe usati wamborambirwa mabhenefiti, kukamurwa pane inishuwarenzi kugadzirisa, kana kunzwa nezveumwe munhu ane - uri munhu ane rombo rakanaka! Iyo inishuwarenzi indasitiri ndeimwe yeinobatsira kwazvo muUnited States. Masvomhu ari nyore, vanhu vazhinji vavanofa - zvirinani purofiti.
Tinogona here kuchinja izvi ne Internet uye blogosphere? Tinogona here kupomba injini dzekutsvaga nemeseji dze Cigna Inoyamwa uye kuita mutsauko? Vanoti ivo vari mubhizinesi rekuchengeta. Ichokwadi here ichocho? Kuva nehanya hakuite mari yakawanda here pane kusava nehanya? Ini ndinotenda kuti Vanachiremba vane hanya, asi makambani eInishuwarenzi ane zvinopesana zvinokurudzira.
Mutsamba yaDecember 11, vanachiremba vana vakakwidza inishuwarenzi kuti vafunge zvakare. Ivo vakati varwere vari mumamiriro ezvinhu akafanana vanozoiswa vane mwedzi mitanhatu yekupona yeinenge 65 muzana.
Cigna akati yaive yekuyedza uye isina kuvharwa nemutemo wavo.
Nataline Sarkisyan ikozvino afa mushure memakore matatu ekurwisana neleukemia uye nekunyimwa kuiswa kunodiwa kubva kukambani yeInishuwarenzi, Cigna.
Ichi hachisi chinhu chipfupi chekutanga degree kuuraya mumaziso angu. Anoshandirwa anorasikirwa nemushandi nekuda kwenzvimbo dzekushanda dzisina kuchengetedzeka anogona kupomerwa mhosva yekuuraya munhu kana kufa zvisizvo, nei Inishuwarenzi Kambani? Cigna haana kufuratira mamiriro ezvinhu, ivo vakaiongorora uye vakaita sarudzo yekuziva kusiya murwere kuti afe.
Idzi nyaya zvese kutsamwa uye kundityisa. Kana iwe uine chitoro muCigna kana kunyangwe Mutual Fund ine Cigna mumusanganiswa, ndinokukurudzira kuti usatsigire kambani yakadaro. Inguva yekuti makambani einishuwarenzi arege kumisikidza homwe dzavo neropa revanhu chaivo vanovabhadhara.
Zvimwe pane kurwa kwaNataliine:
Nataline anofa, kunyara paCigna
Cigna inouraya Nataline
CIGNA Executive Management Team - unorara sei usiku?!
H. Edward Hanway, Sachigaro uye Chief Executive Officer, CIGNA Corporation
Michael W. Bell, Executive Mutevedzeri Wemutungamiriri uye Chief Financial Officer, CIGNA Corporation
David M. Cordani, Mutungamiri, CIGNA HealthCare
Paul E. Hartley, Mutungamiri, CIGNA International
John M. Murabito, Executive Mutevedzeri Wemutungamiriri, Human Resources uye Services, CIGNA Corporation
Carol Ann Petren, Executive Mutevedzeri Wemutungamiriri uye General Counsell, CIGNA Corporation
Karen S. Rohan, Mutungamiri, CIGNA Boka Inishuwarenzi uye Mutungamiri, CIGNA Dental & Vision Kuchengeta
Michael D. Woeller, Executive Mutevedzeri Wemutungamiriri uye Chief Information Officer, CIGNA Corporation
Tags: authorureKuona DhiyabhorosiGlobal KushambadziraJascha Kaykas-WolffMindjetSangano
Zvita 22, 2007 na12:00 PM
Doug: Ndangoona "Sicko" nezuro. ZVINOTYISA.
Zvita 22, 2007 na2:03 PM
Chikamu chinotyisa kwandiri ndeichi - kambani yeinishuwarenzi munyika ino ine mvumo yekuramba zvinotaurwa nachiremba kuti zvinorebesa kana kuchengetedza hupenyu.
Bhizinesi rinoita sarudzo yehupenyu kana rufu inofanira kunge isiri pamutemo. Zviri nyore uye zviri nyore.
Zvita 22, 2007 na6:21 PM
Hongu, zvinotyisa, asi ndezvechokwadi kwenguva refu. Chiitiko chacho chose chinoti shamisa: Vamwe vanhu vanofanira kufa nokuti nhengo yenhengo haingowanikwi. Apa taive nenyaya yaivepo, iye akatadza kuiwana.
Kana kuti sezvingabvira, aigona kudaro, asi ipapo vamwe vose vomumhuri yake zvimwe vaizofanira kunge vachitengesa mapenzura mumugwagwa pashure pokunge pfuma yavo vamene yapera. Ndosaka vaifunga kuti vane insurance. Pane chinhu chisina kumira zvakanaka pamufananidzo uyu...
Zvita 22, 2007 na7:11 PM
Ndafara kukuona pano uye ndinovimba uri kuita zvakanaka.
Ndinovimba kuti tinogona kushandisa kumanikidza kunodiwa kuti veparamende yedu vasiye kutarisirwa kwevarwere kwazvinofanira - nachiremba uye kwete kambani yeinishuwarenzi.
Zvita 22, 2007 na6:48 PM
Dambudziko nderekuti makambani einishuwarenzi ehutano 'mutsetse wepasi unoenderana neKUSATI kubhadhara mabhenefiti. Izvi ndizvo zvandakasangana nazvo pandakaedza kuwana mvumo yekupihwa mushonga wemwanakomana wangu. Aive nemvumo yeZyrtec-D, yaive isiri-formulary mushonga muna 2004 pakatanga hondo. handina. Isu tese takanyorerwa mushonga mumwechete weADHD. Yangu yakatenderwa; wake akanga asiri. Izvo hazvina kubvumidzwa kusvika gore rino, apo Zyrtec-D yakabvumidzwa kutengesa OTC? Sangana? Iwe sarudza.
Nyaya yedu idiki kana ichienzaniswa neino, asi musimboti uchiri kushanda. Vakanga vavhara kuisirwa mwongo uye mushure mekuchengetedza saka mupfungwa dzavo, vakanga vaita chisungo chavo chekubvumira mishonga ipi zvayo inodhura yemusikana uyu. Ini ndinopokana chikumbiro chakatanga kusvika kune munhu anoziva (ona zvinyorwa zvangu nezve gastroenterologist inobvumidza mishonga yepfungwa, semuenzaniso), saka zvaive nyore kungoramba. Kunyange pashure pokunge vanachiremba vana vakwidza nyaya yacho, vakaramba.
Michael Moore ane kodzero iyi: Kuisa zvisarudzo zvekurapa mumaoko emunhu chero upi zvake kunze kwachiremba wemurwere hazvina kunaka. Uye kune avo vanonzi 'vanachiremba' kuCigna ndinotofanira kubvunza kuti vanoyananisa sei mhiko yavo yeHippocratic nekuramba kwavanosaina.
Zvita 22, 2007 na7:18 PM
Maererano ne Forbes, H Edward Hanway muripo wakakwana i$28.82 miriyoni uye makore ake mashanu i$5 miriyoni. Hanway anga ari CEO weCigna (CI) kwemakore matanhatu uye anga aine kambani kwemakore makumi maviri nemasere.
Ndiko kuzviyananisa kwaanoita.
Zvita 25, 2007 na2:21 PM
Nehurombo vazhinji vedu vekuAmerica tinopinda muhupenyu hwakakora, mbeveve uye kufara. Tinoverenga nezvenjodzi dzakadai uye tinofunga kuti hazvizoitike kwandiri kana kumhuri yangu . Isu tinoedza kudzikisira kukosha kwayo nepfungwa dzakaita sekuti "akadonha nepakati" kana "angadai akafa zvakadaro". Vedu vezvenhau vari kutadza kunyatso ongorora uye kutaura nezve zvakaipa uye mhosva nemakambani einishuwarenzi nekuti vazhinji veinishuwarenzi vari kubhadharawo vatsigiri. Tine vatori venhau vakadai saJohn Stossel villefying Michael Moores firimu Sicko mwedzi mishomanana chete Natalines Rufu rusati rwasvika.
Kusvikira tese tatsamwa zvakakwana uye tofona, kunyora tsamba uye kuita kuti kutsamwa kwedu kuzivikanwe, maitiro aya anoenderera mberi. Zvitaure nechinyoreso chako , muromo wako uye nebhuku rehomwe yako .
Bata congress yako. Tumirai email vatori venhau venhema . Bata uye tyisidzira kuramba makambani anoshambadza pazviratidziro zvenhau izvi.
Dec 26, 2007 pa 9: 10 AM
Izvi zvese zvinomutsa mimwe mibvunzo zvino zvinondipindura.
Kubva pane zvandakaverenga, kana akawana kuisirwa ZVINOGONA akararama mimwe mwedzi mitanhatu. Zvechokwadi angadai asina kurarama nguva yakareba kupfuura iyoyo. Aiva nechirwere chisingarapiki.
Ndinonzwira mhuri. Asi haina kuchekwa uye yakaoma semamwe mishumo yenhau inoda kuzviita. Dai yaive nyaya yekuti awane kurapwa uku uye ararame kwemamwe makore makumi maviri… its a no brainer. Asi kuwana kuisirwa uku, kwaizoda kuti atore mushonga wekuramba-kurambwa… izvo zvaizomutora aitova asina simba rekudzivirira zvirwere… izvo zvaizoita kuti gomarara ripararire nekukurumidza. UYE gomarara rakanga richiuraya pakutanga.
Uye ndiri kuenda nemuhondo yangu nemakambani einishuwarenzi yehutano izvozvi ini. Saka ndinoziva kuti vanogona kunge vari pasi zvisina musoro. Uye zvandinoda imazana mashoma emadhora… hapana padhuze nenhamba nhanhatu idzi dzanga dzichitenderera.
Dec 26, 2007 pa 9: 34 AM
Ndine chokwadi chekuti pane zvakawanda zvimedu zvisipo, asi chakakosha kwandiri ndechekuti vamwe vanachiremba nanamukoti vakakumbira kurapwa uye vakarambidzwa nekambani yeInishuwarenzi. Isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti HAZVIZVINHU zvinoitika.
Rombo rakanaka nehondo yako! Ndiri mumwe wevakawanda 'vasina inishuwarenzi' munyika muno - ndakafuta uye handikwanise kuzviwana ndega. (Vana vangu vanofukidzwa nepolicy yavo vega).
Dec 26, 2007 pa 10: 16 AM
Ndinovimba navanachiremba nezvese sezvandinovimba nemakambani einishuwarenzi.
Haungakumbiri here kugona kuita chimwe chinhu chingaisa muhomwe dzako nemari yakawanda yezvikepe?
Ichi ndicho chikonzero iwe unogona kukwidza kune wechitatu mutongi gava pasarudzo dzakarambwa. Saka munhu anoti:
A. Haifuridzirwe nemanzwiro emhuri.
B. Haafurirwi nechero yavo pasi (inoenda kune inishuwarenzi uye vanachiremba)
Inogona kuita sarudzo yekupedzisira.
Haisi masanga kuti vanachiremba vazhinji vari mamirioni vari voga.
Saka kunze kwenyaya, ungati unotsigira hutano hwepasi rose?
Zvita 26, 2007 na2:12 PM
Ndakava nemufaro wekuziva vanachiremba vakati wandei uye zvaisiririsa kuona mabatirwo avakaitwa nemakambani einishuwarenzi. Imwe yeshamwari dzangu yakasundwa 'kushandisa nguva shoma' nemurwere wega wega kuti avandudze 'kubereka' kwake. Ndakamuonawo achishandisa 1/3 yemuhoro wake painishuwarenzi yakaipa (imwe indasitiri inobatsira).
AIFANA kuzopindawo mugroup raChiremba pane kuti aite zvake ega nekuti paisave nemutowo waaikwanisa kufambirana nemapepa e insurance. Uku kwaive kutyora moyo nekuti aive Chiremba akanakisa uye aisakodzera kupinzwa mumutsara wekugadzira hutano hwehutano.
Ini ndinofunga muchaona kuti ruzhinji rweVanachiremba havasi mamirioni uye vakatowanda vari kusiya kutarisirwa kwevarwere nekuda kwehupenzi hwese hwavanofanira kubata nahwo. Zvakaipa.
Ndakagara muCanada kwemakore matanhatu uye ini ndinonyatso tsigira hutano hwepasirese (zvikuru kutyisa kwekurerwa kwangu kwekuchengetedza). Chikonzero chiri nyore - ndinotenda kuti mushonga inyaya yemagariro, kwete bhizinesi… kunyangwe muUS takariita bhizinesi reBOOMING.
Canada ine matambudziko ayo, ndinobvuma. Nhau dzinotyisa dzatinonzwa pasi apa ishoma uye mberi pakati, zvakadaro.
Ndinotenda kuti kune mukana mukuru webhizinesi kune hutano hwepasirese zvakare - vanhu havatyi kutanga bhizinesi ravo ivo vasinganetseke nezvehutano hwemhuri dzavo. Vanhu havachatyi kusiya mabasa akaipa, kana, zvichiita kuti mamiriro ekushanda avandudzwe.
Ini zvechokwadi ndinofunga idanho rekukwira. Mushure mezvose, kana iwe uchikwanisa kubhadhara Inishuwarenzi CEO $28 miriyoni pagore, pane mukana wekumwe kugadzirisa, handiti?
Zvita 26, 2007 na2:17 PM
Kwete. Kana iwe ukaona uchipa 33% ZVAKAWANDA yemari yako kuhurumende yeinishuwarenzi… enda mberi. Asi sezvazvakamira izvozvi… Ndinobhadhara mari inosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu / mwedzi kuitira inishuwarenzi yekurapa yakazara (yakanaka kwazvo). Kunyangwe mushandirwi wangu achibhadhara zvakanyanya. Asi icho chikamu chekushandisa vanogadzira.
Zvita 26, 2007 na2:28 PM
Zvinoshamisa ndezvekuti isu tatobhadhara izvozvo, zvakadaro, ck. Kana munhu asina inshuwarisi achinge arapwa, unobhadhara kuburikidza nemitero uye nemitengo yakawedzerwa yekurapwa, nezvimwewo. Tiri kutobhadharira rubatsiro rwezveutano pasi rose… asi ndezvekurapwa chete – kwete mishonga yekudzivirira.
Zvita 26, 2007 na4:24 PM
Nezvekutaura kwako kuti Nataline angadai aine mwedzi mitanhatu ANE kuisirwa - zvisirizvo. Pasina kuisirwa, vakanga vamupa mwedzi mitanhatu ari kunze. Kuisirwa mwongo kwakange kwabudirira mukupedza leukemia asi mutengo waive kukuvara kwechiropa uko kwaisagadzirisika. Kana akanga aisirwa, aiva netarisiro youpenyu huzere. Pasina iyo, akanga aparara.
Iyo system inoputsika zvachose kana vanachiremba vasisina kugona kuve vanachiremba. Kana iwe usingavimbi navo, imhaka yekuti vakafanirwa kudzidzira mushonga wekudzivirira kwavanogutsa insurer, murwere uye kufamba mutsetse pasi nenjodzi dzeinishuwarenzi, zvakare.
Kugadzirisa sisitimu iyi kunoreva kudzikisira mibairo yekukuvadzwa kwakashata uye zvikonzero zvekumhan'ara mhosva, kudzikisira purofiti yeinishuwarenzi uye kudzoreredza tsika yekurapa mumaoko evanhu vakabhadhara mari inopfuura $100K yedzidzo yavo sachiremba. Iwe unofanirwa kuverenga chaizvo Dr. Kirschenbaum's series pamusoro peChiremba, Mari uye Mushonga kune maonero akasiyana. Tanga pano.
Zvita 26, 2007 na4:58 PM
Zvese zvandaiverenga zvaiita senge zvichiratidza chinangwa chekuisirwa chiropa yaive mukana we65% wekurarama mimwe mwedzi mitanhatu.
Zvino sekutaura kwangu kwekutanga, dai izvi zvingadai zvakaita kuti hupenyu hwemamwe makore makumi maviri hugoneke… zvese nezvazvo. Asi kana iine mwedzi mitanhatu… Handisi kuzosvetuka ndichikwira nekudzika kune chero sarudzo. Uye ungafunga kuti wechitatu mutongi gava imhinduro inoshanda.
Uye kunyange zvazvo dziri nyaya, handifunge kuti kugadzirisa hutano hwepasirese, izvo zvinongoendesa mutoro kuhurumende yedu uye ivo vanoyamwa.
Kugadzirisa kwacho, sezvawakataura ku… kudzikisira kukanganisa kukuvadza uye mimwe mitemo. Asi ini zvechokwadi ndaisazoisa manejimendi einishuwarenzi yehutano mune zvinofarirwa naHillary Clinton. Kutaura chokwadi, ndine nyaya dzakakwana dzekuti mari yangu yemutero inopedzerwa kupi… handidi kuti ibhadhare 'nyaya dzeutano' semabasa emhino.
Zvita 26, 2007 na8:07 PM
Per an Associated Press chinyorwa pa http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, vanachiremba vepaUCLA vanonzi vakati “…varwere vari mumamiriro ezvinhu akafanana neaNataline vanozovhiyiwa vane mwero wekurarama wemwedzi mitanhatu unosvika 65 muzana.”
Zvandinonzwisisa kuti zvinoreva kuti aizova nemukana we65 muzana wekupona mwedzi mitanhatu yekutanga, uye kwete, sezvawaona, kuti aizofa zvakadaro pamwedzi mitanhatu. Aiva nechirwere chisingarapiki nokuti chiropa chake chakanga chisisashande zvakanaka chaikonzerwa nokurapa leukemia. Nzwisiso yangu ndeyekuti dai akaikwanisa kusvika kumwedzi mitanhatu, angadai akawana mukana wese wekuita makore akati wandei.
Zvinoratidzika kwandiri zvakatendeseka kubva pane zvaunotumira kuti unotenda kuti hutano hunogona kuita chimwe chinhu chakanaka hunofanirwa kuwanikwa kune avo vanogona kuzvipa, uye kuti vamwe vose vari nani kubva vafa. Ini ndinobvumirana nezvakawanda zvemapoinzi ako uye mazano; Ini ndinofunga kupindirana kwevechitatu ipfungwa yakanaka, kunyanya kana iri kukurumidza, asi pfungwa yako yaunofunga yekuti "ungangomusiya afe, anga achienda zvakadaro" anobva aita seane mweya. Zvinopa pfungwa yekuti unongozvifarira wega uye hapana mumwe munhu.
Zvita 26, 2007 na8:18 PM
Ini ndinoda kuti munhu wese ararame uye awane inishuwarenzi yehutano, zvisinei handifunge kuti ndiyo nzvimbo yehurumende yekuzvipa.
Ndinoda kuona hurumende shoma (kureva, kubvisa IRS), kwete zvakawanda zvayo.
Iwe unofunga kuti madzibaba edu ekutanga akazviita sei? Mhinduro ndeyokuita kuti mutoro kuna vanachiremba uderere (kureva masutu emutemo) uye kwete kutamisa mutoro iwoyo kumutero wose. Hurumende yedu yakaratidza kuti haina hunhu uye haifanirwe kuvimbwa nayo nehupenyu hwedu hwekurapa zvakare. Nevari kutonga, nyaya dzakadai dzinova dzakawanda, kwete zvishoma. Ingotarisa huwandu hwekutadza kwemoyo uye huwandu hwevanopona cancer yeavo vane cancer. Mushonga wega wega unoshanda zvakanyanya.
Asi sezviri kunyaya iripo, regai ndizvitaure zvakare.. kana fungidziro yacho yaive yehupenyu hurefu mushure mekusikwa… saka ini ndinozviita. Asi ndakaverenga mashoko amakataura nenzira isina kunaka.
Ungada chaizvo kuona yakanyorwa zvakanaka, chete chokwadi chimiro chinyorwa pachiri.
Ichi hachisi chidzidzo chiri nyore uye hachifanirwe kuve icho chinoitwa nekupokana kwemoyo. Ndizvo chete mhamha.
Jan 10, 2008 pa 1: 35 AM
The Facts are simple, Cigna haadi kupedza kurapa hurwere, the same Cigna Glendale did this kuMhuri iyi, they fight back in every way they could, to find out the Goverment Agencies let these people abuse the consumer, and nothing. zvaitwa. Yakafukidzwa.
Congressman anobva kuValencia, California Anonyora
Congressman akanyora: Mutsamba yaMay 30th 1996 kuDept of Corporations. Kopi yetsamba yakapihwa Jo Joshua Godfrey.
Ndiri kunyora ndakamiririra vamiriri vangu Josephine Joshua Godfrey vakasangana nematambudziko makukutu neCalifornia ine rezinesi HMO, CIGNA Health care.
Mai Godfrey calims CIGNA vakatadza kunyatsoongorora uye kurapa gomarara ravo remapapu kubva munaKurume 1993 kusvika Nyamavhuvhu 1994. Sezviri pachena gore rakatevera varapi vasiri veCigna vakaziva zviri nyore bundu reCarcinoid mumapapu avo ekuruboshwe uye vakaudza Mai Godfrey kuti Tumor yaifanira kunge yakaonekwa pakutanga kwa1993. Pasinei nekuramba kuramba kwemamota kubva kuCIGNA, bundu racho rakazobviswa paST. Josephs Hospital muBurbank California. Imwe post operative pathology inoshuma bundu "rakakura zvizere ...
Vachiongororwa naGIGNA Mai Godfrey vakakumbira kakawanda kuti vaendeswe kuna mazvikokota kuti varapwe. Nokuda kwechimwe chikonzero chisingatsananguriki GIGNA yakaramba kubvunza nyanzvi kuti iwane kurapwa kwakakodzera. CIGNA yakarambawo kuburitsa magwaro ekwaMai Godfrey kuitira kuti mumwe chiremba aongorore nhoroondo yavo yekurapwa uye kuti arapwe. Marekodhi akabudiswa mushure memakumi ezvikumbiro. Zvakadaro, Mai Godfrey vanotenda kuti vadzivirire CIGNA kubva mukukanganisa magwaro akashandurwa zvine hutsinye.
Nyika yeCalifornia ine basa rekuchengetedza vatengi vakanyoresa muHMOS. Nyika inosungirwa kudzidzisa nekuzivisa vatengi nezveHMOS.Nevanopfuura mamirioni gumi nemaviri vekuCalifornia muHMOS kudzidzisa nekuzivisa vatengi nezvemhando uye kuwana hutano hwehutano ibasa rakakosha. Nehurombo, kana chiitiko chaMai Godfreys chiri chero chiratidzo chekuti vatengi vari kurapwa sei neHMOS, isu tinofanirwa kuongororazve iyo inochengetedzwa hurongwa. Congress yatanga kuongorora HMOS uye mhando yekurapa kwavanopa. Varwere vazhinji vanotenda kuti HMOS inogara ichiramba kuchengetwa uye ruzivo kune varwere kuitira kuderedza mari. Izvo zviri pachena "gag rule" iyo inorambidza varapi kubva mukukurudzira kurapwa kusiri kupfuudzwa neHMO zvakare kunonyanya kunetseka.
Wangu Constituent haasiye ega munhu akambonetseka kubata neHMO.
(1) Ruth Macinnes weSan Diego akafa apo varapi veHMO vakatadza kupa bvunzo dzekurapa kuti vaone nekurapa chirwere chemoyo uye kupindura kune cardiogenic shock emergiences; (2) Will Spense weLos Angeles anorwira hupenyu hwake nekuda kweiyo isiri-Hodgkins lymphoma cancer yaive yakashata. -kuongororwa kweinopfuura gore. Ndinoudzwa kuti sevanhu ava kune zviuru zvevamwe munyika yose vane nyaya dzakafanana.
Ndine ruremekedzo kuti hofisi yenyu iongorore zvirevo izvi, uye kuongorora kana HMOS yeHurumende iri kuongororwa nemazvo uye vatengi vanopihwa ruzivo rwavanoda kuti vaone kurapwa kwemhando yepamusoro. Ndinotenda kuti Mai Godfrey vakabatwa zvisina kunaka nehurongwa hwaifanira kuvachengeta. Kana kutyorwa kwemutemo kukaonekwa ndinokumbira kuti danho ritorwe kune avo vemasangano vane mhosva yekushungurudza vatengi. Ongororo yakazara ichabatsira kuona kuti nyika inozadzisa chisungo chayo kune vanopfuura mamirioni gumi nemaviri evatengi veHMO. Ndokumbira upindure kuna Diretor wedunhu rangu, Armando E. Araloza panguva yako yekutanga mukana.
Dhipatimendi reCorp Reply
Los Angeles, CA Mhinduro »
JO JOSHUA GODFREY ANOGOVA NEVANHU VECALIFORNIA NERUDZI UYU:
BAZI REMABHURI MHINDURO KUCONGRESSMANS TSAMBA YEMUSI WA2 JULY, 1996.
RE: Faira Kwete ALPHA
Ndiri kugamuchira tsamba yenyu yaMay 30, 1996, yakagamuchirwa munaChikumi 4, 1996, maererano nevanhu vataurwa pamusoro uye chirongwa chavo chehutano hwehutano, Cigna Healthcare yekuCalifornia.
Dhipatimendi reMakambani (?Dhipatimendi?) rinotonga Cigna Healthcare uye mamwe hurongwa hwehutano hwehutano pasi peKnox-Keene Health Care Service Plan Act (Health and Safety Code 1340 et seq.) uye mitemo yeCommissioner (CCR Chikamu 1300.40 et seq. .). Dhipatimendi rinotora chikumbiro chega chega cherubatsiro (?RFA?) tinochigamuchira zvakanyanya. MaRFA anogamuchirwa neDhipatimendi anoongororwa kwete chete neruremekedzo kumunhu wega (s), asi neziso rinotarisa kumatambudziko ehurongwa zvakare. RFA wongororo chinhu chakakosha pakuedza kweDhipatimendi rose.
Dhipatimendi rakaongorora kana kuongorora ese maRFA akaunzwa nemhuri yaGodfrey. Nyaya yaJosephine Godfrey yakaongororwa neDepartment's Enforcement Division. Ongororo iyi yaisanganisira, asi haina kuganhurirwa, kuburikidza nekuongororwa kwezvinyorwa zvekurapa zvakakosha, kubvunzurudzwa nevashandi vehurongwa, uye hurukuro yakakura nemhuri yaGodfrey. Nekuda kwekuongorora uku, veEnforcement Division vakaona kuti Cigna akanga agadzirisa zvinogutsa zvichemo zvaAmai Godfrey uye akanga agadzira nzira dzekugadzirisa matambudziko aya.
Nezve RFA yaChristopher Godfrey, Cigna akabvuma kuti (Zita remunhu L Omitted) RN inowanikwa kune vose Mr. naMai Godfrey kuti avabatsire mukubatana kwekutarisira kwavo iye zvino uye kugadzirisa chero matambudziko avangasangana nawo. Ose maRFA aya ave kuvharwa. Zvakadaro, ruzivo rwuri mumaRFA aya uye ese anopinzwa mumutemo unoramba uripo weDhipatimendi kuitira kuti hurongwa hwehutano hutevedzerwe neKnox-Keene Act.
Dhipatimendi rinogovera kushushikana kwako pamusoro pezvinonzi ?gag? zvikamu muzvibvumirano zvevanopa. Bazi nguva pfupi yadarika rakada hurongwa hwekudzima clause muzvibvumirano zvevanopa varo izvo zvaisungira mubatsiri kuti aise chirongwa ichi nenzira yakanaka.? Mukutaura kuchangobva kuitika kune vese vane marezinesi, Dhipatimendi rakati: "Mumwe nemumwe chiremba anoshanda nechiremba uye imwe nyanzvi yezvehutano inofanirwa kutaura zvakatendeseka nezvenyaya dzinogona kukanganisa hutano hwemurwere uye kuda kukurudzira hukama hwekare hwekuvimba. chivimbo pakati pemurwere nenyanzvi yezvehutano.?
Mukuvhara, ndinoda kusimbisa zvakare kuzvipira kweDhipatimendi kumamiriyoni evaCalifornia vakanyoresa muzvirongwa zvehutano hwehutano. Kana iwe uine mimwe mibvunzo, ndapota usazeza kubata Special Assistant (Zita Rakasiiwa)
Jan 10, 2008 pa 1: 42 AM
Ndakanyora nyaya iyi kuVamiriri vemitemo pandaiva nemakore gumi nemana, uye ndinoda kuigoverana nemi.
Ndine makore 14 ekuberekwa uye ndiri mbavha. Ndiri kunyorera kuCongress neSeneti nekuti unoda kubatsira vakabatwa nechirwere chekurapa. Ndairwara, musoro wangu uchirwadza uye amai vangu vakaenda neni kuna chiremba. Ndaigara ndichibuda ropa mumhino uye kutemwa nemusoro. Ndinofunga kuti izvi zvakatanga mukupera kwa1992 kana kutanga kwa1993. Vakati ndakanga ndisina kunaka, uye ndinorangarira mumwe chiremba akanga ane utsinye zvikuru kuna amai vangu neni; aisatomboda kutaura nezvazvo. She said it was all in my head, kuti I was okay. 1993 na1994 akanga asiri makore akanaka muupenyu hwangu. Ndakanga ndisina mufaro. Amai vangu vaigara vachirwara, vari pamubhedha vachikosora, vaigara vachienda kuCIGNA vachiwana mushonga, vachigara vakaneta. Amai vangu vakanga vasisiri amai vamwe chete; musoro wangu wairwadza uye ndakaneta kusanetsa amai vangu sezvo ndaiona kurwara kwavaiita. Aigara akaora mwoyo, achichema nguva dzose, uye aigara akashatirwa uye achikosora. Ndaimupopotera kuti anyarare usiku uye aitichengeta tose takasvinura, zvino ndinonzwa kurwadziwa.
Muna February 1994, ndakanga ndakaora mwoyo, musoro wangu uchirwadza, uye ndakanwa mapiritsi kubva mukabhati yemishonga, kakanga kasiri kekutanga kuita izvi, asi amai vangu vairwara havana kana kumbozviona. Pese pandaitora zvakawanda uye rimwe zuva mhamha vakauya kuzondimutsa ndikaramba kumuka, ndakanga ndaneta. Amai vangu vakati ndizvozvo, pfeka; tiri kuenda kuCIGNA ipapo ipapo. Ndakaendako ndokundiona vana chiremba veCIGNA. Vakandiendesa kunzvimbo ine utano hwepfungwa uye hapana pambiri idzi nzvimbo aiziva zvandainge ndaita. Mama vakafamba neni ndikavaudza zvandainge ndaita. Musi uyu akazoti aizorarama sei ini ndikafa. Amai vangu vakachema nekuti vainge vakaneta vakazvishora nekuti vainge vasina kukwana. Ndakavimbisa mhamha kuti handichazviita zvakare. Amai vangu vakafonera CIGNA vakagumbuka nekutadza kuona kwandainge ndamboedza kuzviuraya, vachivabvunza kuti vaive vanachiremba vakaita sei. Amai vangu vakapopota zvekuti vakabvuma kundipa muviri wakakwana. Pamuviri mukutanga kwaKurume, takanyunyuta zvakanyanya pamusoro pemusoro wangu vakabvuma kuita scan yemusoro wangu. Izvi zvakaenderera mberi kweinenge mwedzi miviri nehafu, imwe scan mushure meimwe, uye pakupedzisira chiremba akati ndaifanira kugezwa sinus yangu, maiva mukupera kwaMay. Amai vangu vakabvunza kana izvi zvaive nekukasira, zvaida kuitwa ipapo ipapo, chiremba akapindura kuti hazvisi zvekukurumidzira. Amai vangu vakati taizozviita muzororo rechirimo.
Kubva munaMay kusvika munaAugust, amai vangu vakarwara zvikuru. Akaenda kwachiremba vakamuisa pahurema kwe6 weeks. Pakati paChikunguru, ndakarota amai vangu vaine kenza yemapapu uye vaizofa. Amai vangu vakagumbuka pandakavaudza izvi. Pakazotanga August, amai vangu vakandiendesa kuIreland kwemwedzi mumwe chete kuti ndinoona sekuru nasekuru vangu. Pandakadzoka kubva kuIreland kupera kwaNyamavhuvhu, pamba pedu pakaita mheremhere, kwe2 weeks CIGNA yakanga yaramba kupa amai vangu x-rays yavo yese vachivaudza kuti varasika. Akanga achangodzitora uye zvairatidza kuti akanga ane kenza yemapapu kweanenge makore maviri. Amai vangu vakavhiyiwa uye 2% yemapapu avo yakabviswa. Aiva nebundu recarcinoid. Amai vangu pavakanga vari muchipatara, chiremba anovhiya akaudza baba vangu vokurera kuti vakanga vasiriwo zvakanaka. Zvakazoguma CIGNA yaramba kuburitsa marecords angu e20 weeks. Pavakaenda kuna chiremba wekunze, CIGNA yanga ichimurapa asthma; ane chirwere chepamusoro cheCOPD uye aive nechimwe chinhu pabapu rake rekuruboshwe sezvaive naamai vangu.
Takaenda tikanotora zvinyorwa zvemhuri yedu yese. Patakaona wangu, takaenda kuna chiremba wekunze, mushure mekuenda kunze kwachiremba ndave kuziva zvino musiyano uripo pakati pachiremba chaiye nachiremba weCIGNA, uye ndinovimba kuti pamwe rimwe zuva ndichakuudza zvese nezvazvo. . Ndakaita dambudziko apo bhonzo rakanga richiparadzwa, apo bhonzo rakanga richisunda nepakati, uye chiremba akati ziso rangu ringadai rakasundirwa kunze. Ndakavhiyiwa paCedar-Sinai. 1995 haisi nani kupfuura 1993 sezvo pachiita kunge pasina kururamisira pazvinhu zvese izvi zvatakaitwa neCIGNA. Tinoda kuti mitemo ishandurwe kuitira kuti pasave nemunhu anozotambura zvakare. CIGNA inoshungurudza mhuri yedu nanhasi. Vanoita kuti amai vangu vacheme kwemaawa akawanda uye ndinovimba muchandirega ndikuudzei zvose pamusoro peizvi zvakare. CIGNA ndofanira kuzivawo kuti kana vabereki vangu vakafa ndichaendepi, uye chii chichaitika kuhanzvadzi yangu? Ndiri muAmerica, uye kana ndakura, handidi kugara pano. Ndinoda kutamira kune vanhu vakanaka uye vane mutsa. Ndichaenda kuIreland.
Iye zvino ndine 27 Years. Nekudaro zvinosiririsa kuti chero mhuri ingadai yakatambura nenzira iyi, uye makororo nemakororo aya akapukunyuka kurangwa muHurumende yeCalifornia.
NDINOTENDA CIGNA GLENDALE
Mar 11, 2008 pa 2: 58 AM
Testimony Senate Rules Committe Inonzwa Nyika yeCalifornia Muvhuro Chivabvu 12th, 1997 pa 2.03PM
Ndauya kuzogoverana zvakaitika kwandiri nemi. Dhipatimendi reMakambani riri kutadza kuita basa rekutonga, uye ruzivo rwemhuri dzangu runoratidza izvozvo. Uye ruzivo rwangu pachangu neCigna Healthcare rucharatidza kuti vatengi vari kushungurudzwa sei, uye kuti Dhipatimendi reMakambani riri kufuratira sei.
Zvakaitika kwandiri naCigna zvakatanga nekushungurudzwa kwevabereki vangu, uye ivowo vakashungurudza nhengo yese yemhuri yangu. Pandairwara uye ndichida chiremba vaindiendesa panze pandaionana, uye ndaizonyadziswa nokuti kazhinji chiremba kwavaindiendesa vakanga vasina kunditarisira. Izvi zvakaita kuti Cigna anditumire tsamba achiti ndaigona kuzvisarudzira chiremba wangu uye vaizondibhadharira mari yekurapwa. Vakaita izvi kamwe chete uye havana kubhadhara mari yekurapa, uye ndakatyisidzirwa nemasangano anounganidza kuti ndaizomhan’arirwa kana ndikasabhadhara mari yacho. Cigna akatiwo ndaigona kusarudza chiremba wesarudzo yangu munzvimbo yangu yekugara Santa Barbara, uye izvi hazvina kumboitika. Cigna akandipa dostor muSanta Barbara asi pandakarwara uye ndaida kuronga nguva uye ndakafonera chiremba haana kuzombondifonera. Patakabata hofisi yavana chiremba vakati havachashanda naCigna, nekuti Cigna haaizoendesa vanhu kana pachidiwa mazvikokota.
Gore rakapera ndaida rubatsiro rwehunyanzvi, uye panguva yekuvhiyiwa chiremba akati ndaida Biopsy. Aifanira kumira pakati uye kuwana mvumo kubva kuCIGNA kuti aenderere mberi. Chiremba akati maitiro maviri aya akabatana uye akanga asati ambotarisirwa kuita MEDICINE nenzira iyi kare. Mushure mekuita uku pandakanyunyuta kuDhipatimendi reMakambani nezveCigna iyi yakaramba mhosva uye yakapindura kuti chiremba akanganisa. Kubva panguva iyoyo chiremba akauya kuMumiriri wake muSanta Barbara akati akaita Biopsy pasina mvumo yavo, uye nhoroondo yangu yechiitiko ichi yaive yechokwadi. Chiremba akati ndaifanira kuongororwa mazuva makumi mapfumbamwe ega ega sezvo iyi yaive mamiriro ekutanga kenza. Cigna akati kana ndaida hunyanzvi uhu ndaifanira kuenda nana chiremba wekuchengeta wekutanga kuti ndive nechokwadi chekuti ndinoida, ivo vakabva vandipa Chiremba wekuchengeta muSanta Maria, kwete kana muRuwa rimwe chete, uye zvimwe awa imwe chete. kubva kwandinogara.
Ini ndiri mudzidzi ndinoenda kuUC Santa Barbara, uye handina chekufambisa. Haisiyo sarudzo inogoneka., uye Dhipatimendi reMakambani pane kuti rindibatsire, rakaita kuti munhu wekuCigna akonzerese kundishungurudza nekukanganisa kurapwa kwangu andifonere zvakare.
May 12, 2008 pa 8: 38 PM
Mushure mechangobva kuva neUnited kwemakore akawanda kambani yangu yakachinjira kuCIGNA.Ini nguva pfupi yadarika ndaifanira kuve neMRI kumusana kwangu uye ndakaudzwa neDR.s Secretary CIGNA yakaipa kwazvo pakubvumidza chero chinhu.Zvakatora mazuva mashanu kuti zvibvumire, asi only after my doctor had to literally beg.Ndakanziwo even if they approve procedures, dzimwe nguva vanotendeuka vozviramba vachiti hazvina mvumo kune zvavanoda, iwe wobva wabatikana nebhiri.To make matters worse ndatambira kufona kubva kuCIGNA tonite kuti ndione kana ndingafarire kudaidza "MURETI WAVO" kune ramangwana remapapu, moyo, musana, kana mapfupa matambudziko mune ramangwana pane kuenda kuPCP yangu !! Ndakavaudza kuti handizosununguke “kuonekwa” parunhare uye ndinokutendai zvakadaro. Akagumbuka chaizvo paakanzwa kuti handina kusvetuka.
Ini ndinotya chose nezveramangwana rekurapa nyaya dzandinoda kutariswa kunyanya kuti ndine 7yr ekuzvarwa, uye CIGNA inoita senge kambani isina hanya mushure mekuverenga mhinduro. Ndinogona kungonamata isu tese tigare takagwinya, nekuti CIGNA iri kunze kwesendi kwete iyo murwere!!!! Izvi zvakajekeswa kwandiri muvhiki 1 chete!!!!!!!!!!!!
Gumiguru 1, 2008 na6: 18 PM
ini ndinoshandira ndege huru ine cigna se ins yangu. ndakatyoka musana kubasa, kubasa, ndakapinda mukati. maneja wehanger uyu anondiudza kuti izvi ” KWETE PAKUVARA KWEBASA” !!
ndakarasa ins yangu "kuremara kwenguva refu" kuburikidza necigna. zvakanaka, ivo - cigna vakanditumira kune hure iri rekurapwa kwemuviri rakaudza cigna zvavaida kunzwa. saka, ndiri kurara nemusana pasina rubatsiro uye nekurwadziwa pasina mari. ndiani anemhinduro uye kana pane anoda nharembozha yekufona, nekuti ini vanhu vekupfuudza uye ndinofanira kuva nenhamba dzekufona, zvese hazvina kubatsira asi mukomana ane maphone number!!
mukuvhara, tsvoda dhongi rangu kune avo vanonyorera, kune avo vasingaite, ndine hurombo nekurwadziwa kwako uye kurasikirwa nehupenyu.
Gumiguru 7, 2008 na1: 14 PM
Amai vangu vave nemakore gumi nerimwe vakashaya uye Cigna ndiyo insurance yavaiva nayo pavakanga vari muchipatara nokuda kweFlu. Mushure menguva diki diki akawedzera kurwara ari muchipatara asi pane kuti arapwe zvakanaka takashanyirwa nemumwe mukadzi aishanda kuchipatara ndokuudza amai vangu neni kuti ndaifanira kuenda kumba nekuti Cigna aisazobhadhara. zvakare pakugara kwake. Amai vangu vaingova nemakore 11 ekuberekwa apo Cigna akavabudisa muchipatara. Hatina kuziva asi Cigna uyo aifanirwa kuziva nekuda kwemagwaro ekurapa aifanira kutumirwa kwavari chero mari yemuripo kuchipatara iyo mai vangu vaive varovera ura muura ndosaka vaibuda ropa mugotsi vachitadza. kumira ega paakaudzwa kuti Cigna akati havachabhadharira kurapwa. Amai vangu vaizodzokera mukati mevhiki iroro kuER vachirwara zvekuti vaisakwanisa kutora ropa ravo nekuti vaizofa ipapo ipapo saka vakaiswa muICU ndipo patakaona kuti vaive vabairwa ura muura. aizoda kuvhiyiwa asi sezvo zvisina kuitwa nekukurumidza akavhurirwa utachiona hunenge hura hwake hwese kubva muura angogara nekuti mhamha vaisaziva kuti vaive neizvi asi Cigna ndiye akazviita pavakamudzinga muchipatara. Akabva aiswa pa life support and less than 55 days later mazuva 7 ndisati ndasvitsa 18years ndakatozoshainira kuti mai vabviswe life support nekuti panga pasisina tariro nekuda kwekukasika utachiona hwaive hwapararira vachiripo. kubuda muchipatara. Idaidze zvaunoda asi imhondi apo mari kana inishuwarenzi chaiyo yaizochengeta amai vangu vari vapenyu asi sezvo vaive neCIGNA HMO vakafunga kuti aisafanirwa kubhadhara. Papera 21years ndichiri kunetseka kuti vangani vamwe vakafa mumaoko avo.
Jun 21, 2009 pa 3: 10 PM
Jo Joshua Godfrey uyo akatambura nemaoko ecigna akatanga United Patients Of America.